Ogaden News Agency (ONA) – Sacuudiga oo Sheegay Dilkii Khashoggi Lasii Qorsheeyay.
Sacuudiga oo Sheegay Dilkii Khashoggi Lasii Qorsheeyay.
Posted by ONA Admin	/ October 26, 2018
Bayaan shalay kasoo baxay dacwad-oogaha dadweynaha Sacuudiga oo ay baahisay wakaaladda wararka dalkaas ayaa lagu sheegay in sharaxaadda cusub lagu salleeyey akhbaar cusub oo Sacuudiga ay ka heleen Turkiga.
Si kastaba, qoraalka ayaan lagu caddeyn cidda horey u qorsheysay dilka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha uu weli wado baaritaanka dadka lagu tuhmayo dilka si loogu soo afjaro hab cadaaladeed.
Dowladda Sacuudiga ayaa shaqada ka ceyrisay shan mas’uul oo sare oo lagu eedeeyay dilka, islamarkaana xabsiga dhigtay 18 eedaysaneyaal ah. Dad uu ka mid yahay Trump ayaa sheegay in dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu qaadi doono mas’uuliyadda kama dambeysta ah ee dilka.